Apartment Zittau Mountains kwindlu enesiqingatha-timbered - I-Airbnb
Apartment Zittau Mountains kwindlu enesiqingatha-timbered
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguWaltraud
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-19 Nov.
Wamkelekile kwikhaya lethu leholide!
Zive usekhaya kwigumbi lethu leeholide elifakwe ngothando kwaye uzenze ukhululeke.
Le ndlu iphakathi kumbindi weJonsdorf kwindlu yethu esandula ukulungiswa enamaplanga kumgangatho ophantsi kwaye inika indawo eyaneleyo yabantu abadala abayi-4. Inamagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezi-2 lilinye kunye nendawo yokuhlala/yokutya enefenitshala etofotofo kunye nekhitshi elivuleleke ngokupheleleyo.
Kolunye udederhu lweentaba ezisezantsi kweYurophu, kweyona ncam isezantsi-mpuma yeSaxony, uya kufumana eyona ndawo mhlawumbi intle yeUpper Lusatia, iiNtaba zeZittau, ezisecaleni komda ophakathi kweSaxony neCzech Republic.
Indawo yethu encinci entle kunye nemozulu entle kunye nezindlu ezintle ezinamaplanga anesiqingatha kufanelekile ukutyelelwa nangaliphi na ixesha lonyaka. Jabulela ukuvuswa kwentwasahlobo ezintabeni, iintsuku zasehlotyeni ezipholileyo okanye amahlathi anemibala yasekwindla, ngelixa uhamba, ukunyuka, ukukhwela ibhayisekile okanye ukuqubha, kukho into yomntu wonke. Kwasebusika, abancinci nabadala banokuwuyeka umphunga ufikelele kumxholo wentliziyo yabo ngokutyibiliza ekhephini, ukutyibiliza emkhenkceni, ukukhwela intaba ebusika okanye ukutyibiliza emanzini. Zivumele ukonwabele ukutya okonwabisayo kwiindawo zokutyela ezininzi kwilali yethu nakwindawo ezingqongileyo Ukuphonononga iiNtaba zeZittau ezintle, iindlela ezininzi zokuhamba zihamba ngokuthe ngqo ukusuka kwindlu macala onke, njengaseWaltersdorf, Oybin, Großschönau okanye iCzech engummelwane. IRiphabhliki nayo yonke into enomtsalane. Zininzi izinto zokuzonwabisa ezilungiselelwe. B. Ukuqubha kwibhafu yeentaba yaseJonsdorf okanye kwi-Olbersdorfer See. Ichibi laseBerzdorf likwafanele uhambo. Ukhenketho lokubhexa kwi-Neisse lwentsapho yonke. Ukuhamba ngebhayisekile eMandau okanye ukukhwela ibhayisekile ezintabeni. Uhambo oluya eZittau, eGörlitz naseBautzen lokuthenga okanye ukukhenketha ngokunzulu kwimbali, njengokundwendwela isigqubuthelo esikhulu seLenten!
Uhambo kumzila kaloliwe wembali emxinwa luhlala lungamava kubo bonke abathanda uloliwe! Ukuhamba ngeentsuku ukuya eDresden okanye ePrague nako kunokwenzeka.
Siyakwamkela ngezandla ezishushu!
Iintsuku eziyi-7 e Jonsdorf
Umbuki zindwendwe ngu- Waltraud
Sihlala kwipropati esebumelwaneni kwaye sinokufikelelwa nanini na.